कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ र कित्ताकाट नगर्न मालपोत कार्यालयहरुलाई सरकारको निर्देशन
सरकारले कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ र कित्ताकाट गरी घडेरीका रुपमा बिक्री गर्न रोक लगाएको छ । भूमिसधार मन्त्रालयले भूमिसुधार ऐन-२०२१ बमोजिम कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण वा कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।
अब यस्ता जग्गा पास नगर्न मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । कृषियोग्य जमिन सबै घडेरीका रुपमा परिणत हुनसक्ने डरलाग्दो अवस्थालाई मध्यजर गरेर यस्तो निर्णय गरिएको भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले जानकारी दिए । २६ साउनमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दहितले यो निर्देशन सबै भूमिसुधार अन्तरगतका कार्यालयलाई दिइसकेको बताए ।
अब सरकारबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीका रुपमा कित्ताकाट गर्न र बिक्री वितरण गर्न नपाइने भएको छ । यो नियम सगोलका अंशियारबीच अंशबण्डा हुँदा र अदालतबाट प्राप्त आदेशहरुमा भने लागू हुने छैन । अब कुनैपनि किसिमका जग्गा जग्गाधनीले वर्षमा एकपटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न पनि नपाउने मन्त्री दहितले जानकारी दिए ।
सरकारबाट जग्गा प्लटिङको अनुमति लिएर ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा बिक्री गरिसकेको भए वा सरकारबाट स्वीकृत खुला क्षेत्र, बाटो, सरकारी जग्गा छुट्याएर त्यो सरकारको नाममा कायम गरिसकेको भए त्यो घडेरी बेच्न यो निर्णयले बाधा नपर्ने दहितले बताए । अनुमति नलिई जग्गा प्लटिङ गरिएको छ भने अब ति घडेरी पनि पास हुने छैन ।
तपाइको गाडी कति वर्ष भयो ? चैत्रबाट चलाउन नपाइएला है ?
जहाँ मुलुकमै अहिलेसम्मको बढि मतान्तरमा जितियो
धादिङको चार वटै प्रदेशसभामा बाम उम्मेदवार विजयी
कर फर्छ्योट आयोगका महत र ढकाल धरौटीमा रिहा
शिखरको ७ औं साधारण सभा
उपचार गर्न नसकेपछि... ...
काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौँडा सुरुङ मार्गमा चाइना रेल वे कम्पनीले ३८ अर्ब लगानी गर्ने
चन्द्रागिरीको सडकः बनाउने नाउँ, ढुङ्गा बेच्ने दाऊ [विकासको नाममा के हुँदैछ विनास, पढ्नुहोस्]
दामन आधुनिक सहर, टिष्टुङ कुलेखानी राजधानीको उपशहरः वाम घोषणा पत्र
१८ वर्षपछि पुन: कमल थापासँग मैदानमा
राजु बिरहीको एउटा कुराले करिश्मा ढकाल मायामा (भिडियो सहित)